‘७ घण्टे उडानको सबै टिकट १० मिनेटमै बुक’ – Rapti Khabar
‘७ घण्टे उडानको सबै टिकट १० मिनेटमै बुक’
असोज ३ सिड्नी कोरोना भाइरस कोभिड–१९ को महामारीका कारण मानिसलाई भ्रमण गर्न निकै गाह्रो भइरहेको छ।
किनभने कोरोना प्रकोपका कारण सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छन्। घरेलु उडान केही देशमा सुचारु भइसके भने केहीमा अझै ठप्प छन्।
यद्यपी कोरोना प्रकोपले गर्दा धेरै मानिसले विमानमा यात्रा गर्न पाएका छैनन्, आफूलाई मन लागेको स्थानमा घुम्न जान पाएका छैनन्।
सँधै घरमै बस्दा मानिसहरुलाई उकुसमुकुस भइसकेका छन्। यसबीचमा अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय ध्वजावाहक ‘कन्टास’ एयरलाइन्सले एउटा रमाइलो योजना ल्याएको छ।
यस योजनाको अर्थ अस्ट्रेलियाका नागरिकलाई कोरोना प्रकोपबीच तनावमुक्त, उकुसमुकुसमुक्त बनाउनु हो। कन्टासले कहीँ पनि नपुगिने ७ घण्टे उडानको योजना ल्याएको हो। आगामी अक्टोबर १० मा कन्टासले सिड्नीबाट ७ घण्टाका लागि उडान भर्नेछ।
विमानले यात्रुलाई आकाशमै घुमाएर फेरि सिड्नीमै ओह्राल्नेछ। सो क्रममा विमान अलुरु, काटा जुटा, द विटसन्डेज, गोल्ड कोस्ट, बाइरन बे र सिड्नी हार्बोरमाथि उड्नेछ।
कन्टासले यसै उडानका लागि हालै १३४ सिटका लागि टिकट बुकिङ पनि खुलाइएको थियो। तर टिकट बुकिङ खुलेको १० मिनेटमै सबै टिकटहरु बुक भइसकेको सीएनएनले उल्लेख छ।
टिकटका मूल्यहरु ७८७ अस्ट्रेलियन डलरदेखि ३७ सय ८७ डलरसम्म तोकिएको थियो। तर यतिबेला सबै टिकट बुकिङ भइसके। कन्टासले इतिहासमै पहिलोपटक यति चाँडै टिकट बुकिङ भएको जनाएको छ।
कोरोना महामारीले संसारलाई नयाँ जीवनशैली र गतिविधितिर धकेलेको छ। मान्छेहरू घर र निश्चित ठाउँमा मात्र थुनिएका कारण उकुसमुकस भइसकेका छन्।
केही मान्छे कतिसम्म गुम्सिएका छन् भन्ने एउटा उदाहरण अस्ट्रेलियामा देखिएको छ। अस्ट्रेलियामा करिब सात महिनादेखि उडानहरू भएका छैनन्। मान्छेहरू जहाजमा यात्रा गर्न पाएका छैनन्। पाइलट र जहाज कर्मचारी पनि उडान भर्न आतुर छन्।
अस्ट्रेलियाको कान्टास एयरलाइन्सले यसको उपाय निकालेको छ- सात घन्टा उडान गर्ने तर कहीँ पनि नपुग्ने! हो, कान्टासले आगामी अक्टोबर १० मा सात घन्टे उडानको तयारी गरेको छ।
सिएनएनका अनुसार यो उडानको कुनै गन्तव्य छैन। सिड्नी विमानस्थलबाट उड्ने यो जहाज सात घन्टासम्म यसै आकाशमा उडिनै रहनेछ। र समय सकिएपछि फर्किनेछ।
अब भन्नुहोला, बिना गन्तव्यको जहाजमा को जाला? यो सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुभयो। किनकी यो उडानको बुकिङ खुला भएको १० मिनेटमै सबै टिकट बिकिसकेको एयरलाइन्सले जनाएको छ।
‘कान्टास एयरलाइन्सको इतिहासमै यो सबभन्दा चाँडो टिकट बिकेको उडान हो,’ एयरलाइन्सका सिइओ अलान जोयसका भनाइ उद्धृत गर्दै सिएनएनले लेखेको छ।
उनले थप भनेका छन्, ‘मान्छेहरूले उडान मिस गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई उडानको महशुस गर्न हतार भएको छ भलै जहाज कहीँ अवतरण नहोस्। झ्यालबाट अनुभव मात्र गर्न भए पनि मान्छे आतुर छन्। यसखाले उडानको थप माग भए हामी यसका लागि अझै पहल गर्नेछौं।’
सिएनएनका अनुसार जहाज यात्राका लागि मात्र तय भएको यो उडान क्वीन्स ल्यान्ड, गोल्ड कोस्ट, न्यु साउथ वेल्स र केही ग्रामीण भेगका आकाशमा हुनेछ।
कान्टास बोइङ ७८७ ड्रिमलाइन्स जहाजले गर्ने यो उडानका लागि ५६६ देखि २ हजार ७३४ अमेरिकी डलरसम्मका टिकट थिए। यो उडानका लागि तय भएका १३४ वटा टिकट १० मिनेटमै बिक्री भएको एयरलाइन्सले जनाएको छ।
विदेशमा नेपाली कामदारको माग आउँन थाल्यो
काठमाडौँ, भदौ २० । कोरोना महामारीका कारण स्वदेश तथा विदेशमा धेरैको रोजगारी गुमेको अवस्थामा केही श्रम गन्तव्य देशबाट नेपालीका लागि नयाँ माग आउन थालेको छ । त्यसै आधारमा नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका रोजगारदाता कम्पनीले १० देखि २० प्रतिशतसम्म नेपाली श्रमिकको माग आउने जनाएको छ । यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी […]
काठमाडौँ उपत्यकामा थपिए ७११ संक्रमित, देशभर कुन जिल्लामा कति ? (हेर्नुस विवरण)